Home Wararka Dibada Donald Trump Oo Waxba Kama Jiraan Ku Tilmaamay Marag Ay Gabadhiisa Furtay
Donald Trump Oo Waxba Kama Jiraan Ku Tilmaamay Marag Ay Gabadhiisa Furtay
Madaxwaynihii hore ee Maraykanka Donald Trump ayaa mar kale dhaliilay inantiisa Ivanka kadib markii ay iska fogaysay sheegashadiisii aan sal iyo raadka lahayn ee uu ku sheegay musuqmaasuq ballaaran oo doorashooyinka ah.
Baaritaan lagu sameeyay rabshadihii 2021 xarunta US Capitol ayaa lagu baahiyey muuqaal aan hore loo arag oo Ivanka ku diidayso sheegashadiisa.
Trump ayaa waxa uu sheegay in Ivanka aysan eegin natiijada doorashada oo ay “in badan tan iyo markii la hubiyay”. Dimuqraadiyiinta ayaa ku doodaya in weerarka lagu qaadeen Congress-ku uu ahaa midhihii isku dayo badan oo Trump ku doonayey inuu afgembi ku dhigo.
Sawirro naxdin leh iyo marag furka dadkii goob jooga ahaa weerarkii 6-dii Jeeniweri 2021 lagu qaaday Capitol ee Washington DC waxaa talefishan ka sii daayay Khamiistii guddiga doorashada Aqalka Wakiilada Mareykanka.
Dhegeysiga wakhtiga arinta laga hadlayey waxa uu soo jiitay 20 milyan oo daawadayaal shabakadaha TV-yada ah
Previous articleCabdiraxmaan Cabdishakuur oo sheegay in dalka uu ku sugan yahay xaalad Qatar ah
Next articleMadaxweynaha Somaliland Iyo Wafdi Uu Hoggaaminayo Oo Gaaray Magaalada Ceerigaabo